पेटको बोसो घटाउने हो ? दैनिक खानुहोस् यी खानेकुरा (टिप्ससहित) « Lokpath
२०७६, १७ भाद्र मंगलवार ११:४७
प्रकाशित मिति : २०७६, १७ भाद्र मंगलवार ११:४७
स्लिम पेट कसलाई मन नपर्ला र ? तर दुर्भाग्य अस्वस्थकर खानपान, प्रदुषित वातावरण, व्यस्त जीवनशैली आदीका कारणले हिजोआज महिला तथा पुरुष दुवैको पेट पुटुक्क देखिन्छ । अर्थात् पेटमा बोसो जमेको छ । त्यसले शरिरहको आकर्षणलाई मात्रै विगार्दैन विभिन्न खालका रोगहरु पनि तिनैका कारण लाग्दछन् । त्यसैले पेट घटाउने मन सबैलाई हुन्छ । तर कसरी ?
सबैको साझा प्रश्नको जवाफ केहि चिकित्सकसँग लिएर टिप्सको रुपमा लोकपथ डटकमले तयार पारेको छ ।
-शारारिक ब्यायाम गर्नुहोस् ।
-राती छिटै सुत्ने र बिहान चाडै उठ्ने बानी गर्ने ।
-नियमित रुपमा शारीरिक कसरत गर्ने ।
-बढि भात खाने बानी त्याग्नुहोस् । भातको सातो गहुँको पिठोबाट बनेका रोटी तथा अन्य परिकार खानुहोस् । फाइबरयुक्त खानेकुरा खाँदा राम्रो स यदि तपाईं भात नखाई हुँदैन भन्ने किसीमको बानी छ भने खानमा सोखिन हुनुहुन्छ भने बढि सेतो चामलको भात खाने बानी त्याग्नुहोस् । ब्राउन राईस खानुहोस् ।
-तनाव कम गर्नुहोस्
-पुरा निन्द्रा निदाउनुहोस् ।
-मद्यपान बन्द गर्नुहोस्
-बेलुकाको खाना खानुभन्दा पहिले काँक्रोको जुस वा सलाद खानुहोस् ।
-गुलिया परिकार जस्तै मिठाइ, चिनियुक्त गुलियो ड्रिंक्स, तथा तारेको खानेकुरा बढी नखानुहोस् ।
-प्रसस्त मात्रामा पानी पिउनुहोस् ।
-धनियाँको जुस पनि मिलेसम्म सेवन गर्नुहोस् ।
-एलोभेरा जुस पिउनुहोस् ।
-ग्रिन टीको सेवन गर्नुहोस् ।
-अदुवाको रस पिउनुहोस् । यसमा दालचिनी मिसाए झनै राम्रो
-तरकारीमा अदुवा, लसुन, मरिच तथा दालचिनी जस्ता मसला राखेर पकाउनुहोस् । तर धेरै -चिल्लोचापुल्लो तथा सरमसला प्रयोग नगर्नुहोस् । केरा, पुदिना, बदामको प्रयोग गर्नुहोस् ।